PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-09-27 - Babesela kodwa benganxili
Babesela kodwa benganxili
Isolezwe lesiXhosa - 2018-09-27 - IZIMVO - Ngokubhalwe nguXolani Mavela
XA kusongwa inyanga yoMsintsi, inyanga yokubhiyozelwa kwamafa ezizwe ngezizwe zamaAfrika, ndithi mandiqale ngokunqwenelela ukwanda kwezizwe zama-Afrika, ukuqhama kwezizwe zama-Afrika, ukuhluma kwamafa namagugu ethu kwanokuzinza kwawo, agcinwe, aphilwe kwaye axatyiswe ngonaphakade ngabantwana bethu kwanesizukulwana se-Afrika ngokubanzi.
Okona kungumnqweno wam, kukuba amafa namagugu esizwe sikaNtu, isizwe sikaXhosa, angavuseleleka ezingqondweni zethu, avakale ngoncuthu ezintliziyweni zethu, ukuze isizwe sikaNkosiyamntu, singaphuncukwa bubuntu baso kwanentlalo yaso.
Phakathi kwezinto eziyintsika kwimveli kaNtu, bubuchule bokusilwa kotywala besintu umqombothi, okwayilwa ngookhokho bethu phambili phaya.
Iingcali zembali nemveli ziveza ukuba phambi kokuyilwa komqombothi, kumasiko nezithethe zikantu kwakusetyenziswa amasi, masi lawo ayephuma kwiinkomo zomzi ngamnye, kunjalo nje amaXhosa awuqhube ngobuchule nangengqiqo egqibeleleyo umsebenzi kuba wawuqhutywa abantu bethe qwa, kungekho namnye ophantsi kwefuthe neempembelelo zotywala, okanye ngeliphandle, kungekho namnye unxilileyo.
Ukuselwa kotywala kude kunxilwe, kunganefuthe elibi kumafa ethu. Asikho isizwe esinokuzinza sibe nokuzixabisa xa sambethwe kukunxila nokuqhutywa kwamatakane ngabemi baso.
La mafa namagugu siwabhiyozelayo, ukuwa nokuma kwawo kuxhomekeke ekuhlonitshweni kwawo sithi, kuxhomekeke ekucezeleni kwethu kubunxila, kuxhomekeke kwisiphakamiso sam sokuba amafa namagugu ethu abhiyozelwe kwaye aphilwe sithi umhla nezolo, kungapheleli nje kwinyanga yoMsintsi asikelwe yona.
Kuninzi lweziyunguma zokubhiyozela nantoni na kwintlalo kaXhosa, kuquka nokubhiyozelwa kwamafa la singawo kule nyanga, sele iyinto elindelekileyo neqhelekileyo ukuba kubekho iziselo ezinxilisayo.
Utywala obuyimveli yethu umqombothi, kule mibhiyozo uye ufumanise ukuba abusathakazelelwa ngokulinganayo nobu basemzini.
Lo mba uwodwa, walatha ukuba sisisizwe esithakazelela amafa ezinye izizwe ngaphezu kwezi zethu.
Into ehlekisayo ke kule nto yokuxatyiswa kotywala basemzini bebhotile ukogqitha obu bulilifa nemveli yethu, yeyokuba obu bethu bobona tywala busilisiswayo, bobona tywala bumfaxangisiswayo, bobona tywala bunezithako ezithwele izakhamzimba ezinegalelo elincomekayo empilweni. Utywala bethu babuselwa bubuninzi busiza ngeefatyi ezinkulu, imiphanda namagongqo amakhulu, kwabelwane ngabo ngeebhekile eziyimixobo, kodwa emva kokuselwa kwabo, wawungasoze ubabone oobawo nookhokho bethu benxilile, begxadazela, besitsha imilebe yemilomo, begqajukelwa zizibindi, bephathwa yingcangcazela, bebhuqwa yinyongo okanye besilwa, bebulalana okanye bexhaphaza iintsapho namanina kuba besithi bebephantsi kwefuthe lotywala.
Amanyange ayesela, oobawo babesela, oomakhulu noomama bentlalo kaNtu babesela phantsi zonke iimpelaveki, kodwa ndifung`amaNgwevu kaMatha kaNomangqosha, ndifung`abakhozi kwelaseMalawi kooBotawoda, abazange babonwe nakanye begxadazela, abazange baviwe nakanye beshwabene amalwimi, abazange benze zimanga namanyala emva kokusela utywala, kwaye nangaphezu kwako konke, abazange babonwe benxile bemdaka!
Ndikhumbul` ubawomkhul` uDluntu esaphila kweliya laseMgwali, ebesithi xa ebuya kwisisusa esinotywala, ekhangeleka onwabile kwaye enganxilanga, ancume akugqiba avume ingoma yakhe athi “Hee mfondini, kuthen`unxilile nje?”
Ndikhumbula ubawomkhulu uGxwabule, inene lasemaBambeni, elalikuthanda kanobom ukusela umqombothi, ukuze athi ngaloo mini athenge ngayo utywala bebhotile, andicele ndiyifake kwityesana yakhe, amane ukuya kuthi qongqololo ihintyana kuyo singaboni singabantwana, amane ukuya kuloo bhotile kancinci, ihlale kulo tyesana inyanga yonke ukuya kwiinyanga ezimbini.
Ndikhumbula ubawomkhulu uNkqayana, ikroti lasemaNgwevini, awayebuthanda kakhulu utywala besintu engcathu kobasemzini, kangangokuba umve ebalisa ukuba ngangendlela obunendili ngayo utywala besintu, uthi umntu obuseleyo sele evutheliswa ngoomatshini bamagosa ezendlela, bungaveli tu obu bakowethu utywala, bube obasemzini buvela kwabo matshini.
Oobawo babesela, oomakhulu bethu babesela kodwa babenganxili. Babesela usuke kubo uqaphele ububele obungumangaliso endaweni yokugxadazela nokwenza amahlazo.
Amanyange ayesela kodwa ungasoze uwabone elele ezigangeni, engasoze azichamele, engasoze ahlaze imizi yawo nentsapho zawo ngenxa yokunxila. Zitshintshe phi izinto? Kutheni kuselwa kunxilwe kule mihla?
Thathani isigqibo zidwesha zakuthi xa sisonga inyanga yamafa ethu, nilikhuphe litsole elithi akuyi kuphinda kubonwe okanye kunyanyezelwe mXhosa ulinxila elinuka isankqanga! Ukuba asinakunxila, singasisizwe esihloniphekayo nesinamafa axatyiswayo!